3D mgbaghoju anya ZeGame ugbu a na Steam na ngosi na ego | Esi m mac
Laura varo | | Egwuregwu
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke sistemụ nrụọrụ Mac OS X 10.8 ma ọ bụ karịa, ma ị nwere ma ọ dịkarịa ala 300 Mb nke Ram na 120 Mb nke ohere dị na draịvụ ike gị, ị nwere ike ibudata ugbu a ngosi ngosi site n'aka ZeGame na nke zuru ezu nke egwuregwu a na-adọrọ mmasị nke 3D egwuregwu mgbagwoju anya site na mmeghe mmeghe nke 10%.
Ọ bụ egwuregwu egwuregwu indie dezie site na Jesper the End, Onye Mmepụta Dutch na-esonyekwa na Ọrụ Minecraft. Oge a ọ wetaara anyị egwuregwu nke ga-anwale ndị ọrụ na-enwe ndidi na nka.
Na a mfe ntọala na pụtara ìhè nzụlite na na agba, a mgbaghoju anya na-mepụtara na 2 egwuregwu ụdịdị, 8 ụwa na 160 na-agbasawanye ọkwa, ebe ZeGame gunyere a nchịkọta akụkọ na ndị obodo nwere ike ịkekọrịta.
Usoro ohuru na ọkwa ọ bụla nke ZeGame
Otu n'ime njirimara ndị na-agbagwoju anya na-enweghị mmasị bụ mmetụta nke nwayọ nke na-eme na ụdị a. ZeGame na-ejisie ike idobe ọkwa nke nlebara anya na nke kachasị na iwebata nke usoro ohuru na echiche na ọkwa ọ bụla na budata dịkwuo mgbagwoju anya.
A ga-edozi ihe mgbagwoju anya ọ bụla site n'itinye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ site na nkwekọrịta na ihe mgbochi siri ike nke ihuenyo nke ga-ekwe ka ịga n'ihu nke mmegharị ahụ. Dynamics na-enye ohere mmeghari ahịrị kwụ ọtọ enwere ike ịchịkwa ya site n'akụkụ ọ bụla ekele maka 360º ntụgharị nke igwefoto.
Isi ihe ọzọ dị mkpa maka ZeGame bụ usoro nke iwebata ngwa ngwa na mbido ọkwa ọ bụla ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ inyocha njikwa na ịba uru nke ihe ọhụụ. N'ụzọ nke a zere nkuzi na ederede sara mbara, na-enye ike mmụọ na echiche nke ịga n'ihu.
Egwu na nsonaazụ ndị ọzọ ọmarịcha ọnọdụ nlegharị anya nke a na-enwetakwa mmetụta ihu igwe dị ka mmiri ozuzo na oké ifufe, na-ezere ihe ndọpụ uche ọ bụla maka onye ọkpụkpọ ahụ.
ZeGame dị site na Mee 27 na Steam maka Mac OS X na nyiwe ndị ọzọ. Ị nwere ike ibudata ihe ngosi site na Steam na-erite uru nke igba egbe enye nke 10% naanị rue June 3 nke zuru ezu nke ZeGame.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Egwuregwu » 3D mgbaghoju anya ZeGame ugbu a na Steam na ngosi na ego
Syberia na Syberia 2, na-ere maka obere oge Mac App Store